Ụlọ Nche (Nke A Na-amụ Amụ) | Ọgọst 15, 2001
Ogologo oge ha aṅaa ka Job tara ahụhụ?
Ụfọdụ ndị na-eche na ọnwụnwa Job were ọtụtụ afọ, ma akwụkwọ Job adịghị ekwu banyere ahụhụ dị otú ahụ nke were ogologo oge.
Akụkụ nke mbụ nke ọnwụnwa Job, ọnwụ nke ndị ezinụlọ ya na mfu nke ihe onwunwe ya, yiri ka ha mere nnọọ ná mkpirikpi oge. Anyị na-agụ, sị: “O ruo, n’otu ụbọchị, mgbe ụmụ [Job] ndị ikom na ụmụ ya ndị inyom na-eri ihe na-aṅụkwa mmanya vine n’ụlọ nwanne ha, bụ́ ọkpara.” (Ọ bụ anyị dere okwu ụfọdụ n’aka akwụkwọ dị iche.) A bịara na-eme otu onye zisịa Job na ihe onwunwe ya efunahụwo ya onye ọzọ abịa zie ya—ehi ya, ịnyịnya ibu ya, atụrụ ya, camel ya, nakwa ndị na-azụ anụmanụ ndị ahụ. Ihe àmà na-egosi na ozugbo nke ahụ gasịrị, Job nụrụ banyere ọnwụ nke ụmụ ya ndị ikom na ndị inyom, bụ́ ndị “na-eri ihe na-aṅụkwa mmanya vine n’ụlọ nwanne ha, bụ́ ọkpara.” O yiri ka ihe a nile hà mere n’otu ụbọchị.—Job 1:13-19.
Ọ ghaghị ịbụ na akụkụ nke abụọ nke ule Job were oge karị. Setan jekwuuru Jehova ma kwuo na Job ga-ada ma ọ bụrụ na ahụhụ ahụ emetụta ya kpọmkwem—n’ahụ ya. Mgbe ahụ, e ji “ihe ohihi ọjọọ tie Job, site n’ọbụ ụkwụ ya ruo n’opu n’isi ya.” Ọ pụrụ ịbụwo na ọrịa a wetụrụ oge tupu ọ na-agbasa n’ahụ ya dum. O yikwara ka ọ ga-ewewo oge tupu ndị ahụ mere ka a ga-asị na ha bịara ịkasi ya obi, anụ “ihe ọjọọ ndị a nile,” ma malite ịbịakwute ya.—Job 2:3-11.
Elifaz si Timan nke dị n’ala Edọm, Zofa sikwa n’ógbè dị n’ebe ugwu ọdịda anyanwụ nke Arebia, n’ihi ya, ebe ha bi adịghị anya site n’ebe Job bi na Uz, bụ́ nke dị, ma eleghị anya, n’ebe ugwu nke Arebia. Otú ọ dị, Bildad bụ onye Shua, o dokwara anya na ndị obodo ya bi n’akụkụ Yufretis. Ọ bụrụ na Bildad nọ n’obodo ya mgbe ahụ, ọ pụrụ iwewo ya ọtụtụ izu ma ọ bụ ọtụtụ ọnwa iji nụ banyere ọnọdụ Job ma gaa Uz. N’ezie, o kwere omume na mmadụ atọ ahụ nọ n’ógbè Job mgbe ahụhụ ya malitere. Nke ọ bụla ọ bụ, mgbe ndị enyi atọ Job bịarutere, ha “na ya wee na-anọkọ n’ala ụbọchị asaa ehihie na abalị” n’ekwughị okwu.—Job 2:12, 13.
Mgbe ahụ ka akụkụ ikpeazụ nke ule Job bịara, bụ́ nke e dekọrọ n’ụzọ zuru ezu n’ọtụtụ isiakwụkwọ nke akwụkwọ ahụ. Ndị ahụ sị na ha bụ ndị nkasi obi sooro ya rụrịta ụka ma ọ bụ gwa ya okwu, onye kwupụ ibe ya ekwuo, Job zaghachikwara mgbe mgbe. Mgbe nke ahụ gasịrị, nwa okorobịa ahụ bụ́ Elaịhu kwuru okwu ndụmọdụ, Jehova gbazikwara Job site n’eluigwe.—Job 32:1-6; 38:1; 40:1-6; 42:1.
N’ihi ya, ọ pụrụ ịbụ na ahụhụ Job na ngwọta ya mere n’ime ọnwa ole na ole, ikekwe n’ihe na-erughị otu afọ. Ị pụrụ ịma site n’ahụmahụ i nweworo na ọnwụnwa ndị siri ike na-eyi ka ha na-adịru mgbe ebighị ebi. Ma, anyị agaghị echezọ na ha na-abịa ná njedebe, dị ka nke Job mere. N’agbanyeghị ogologo oge ọnwụnwa ndị anyị na-eche ihu ga-ewe, ka anyị na-eburu n’uche na Chineke ga-akwado anyị, dị ka e gosipụtara n’okwu ndị a e dere n’ike mmụọ nsọ, sị: “Mkpagbu anyị nke dị mfe, nke dị na nwa oge a, na-arụpụtara anyị ebube nke ukwuu hie nne kachasị ihe nile, bụ́ ebube nke dị arọ dịkwa ebighị ebi.” (2 Ndị Kọrint 4:17) Pita onyeozi dere, sị: “Chineke nke amara nile, Onye kpọbatara unu n’ebube ebighị ebi Ya n’ime Kraịst, mgbe unu hụworo ahụhụ nwa oge, Ya onwe ya ga-eme ka unu zuo okè, meekwa ka unu guzosie ike, meekwa ka unu dị ike, tọọkwa unu ntọala.”—1 Pita 5:10.
Akwụkwọ Na-adịghị Amasị Ihe Ka Ọtụtụ ná Ndị Na-eto Eto
Inwe Ihe Ịga nke Ọma n’Oge Ntorobịa Gị
Inwe Mmeri n’Ụlọikpe Maka Ihe Ndị Metụtara Iwu Na-achị Mba
Inwu Dị Ka Ndị Na-enye Ìhè N’obodo Nke Ìhè
Abraham—onye Nlereanya nke Okwukwe
Nwee Okwukwe Dị Ka Nke Abraham!
Ike Agwụla Gị n’Ime Ihe Ọma
Text Họrọ ụdị nke ị ga-adanlodu ỤLỌ NCHE (NKE A NA-AMỤ AMỤ) Ọgọst 15, 2001
Ọgọst 15, 2001
ỤLỌ NCHE (NKE A NA-AMỤ AMỤ) Ọgọst 15, 2001